रुसले नेपाललाई दिने भ्याक्सिन ‘स्पुतनिक भी’ सरकारले ल्याउने पहल नगरेर किन प्राइभेट कम्पनीमार्फत नेपाल भित्रिदै छ ? – Sulsule
रुसले नेपाललाई दिने भ्याक्सिन ‘स्पुतनिक भी’ सरकारले ल्याउने पहल नगरेर किन प्राइभेट कम्पनीमार्फत नेपाल भित्रिदै छ ?
के साँच्चै कोरोना विरुद्ध भ्याक्सिन बनेकै हो त ?
सुलसुले २०७७ असोज १४ गते १४:५१ मा प्रकाशित
रुसले नेपाललाई कोरोना विरुद्धको उपलव्ध गराउने भनेको भ्याक्सिन ‘स्पुतनिक भी’ किन नेपाल सरकार आफैले ल्याउने प्रयत्न नगरेर प्राइभेट कम्पनीमार्फत नेपाल ल्याउने क्रममा रहेको छ ?
असोज १३ गते मंगलबार आरडीआइएफले विज्ञप्ति निकाल्‍दै नेपालको ट्रिनिटी फर्मास्युटिकलसँग २ करोड ५० लाख डोज ‘स्पुतनिक भी’ दिने सहमित भएको बताएको छ। यो भ्याक्सिन अरु भन्दा धेरै सस्तो हुने पनि जनाएको छ ।
यसले नेपालको करीब ९० प्रतिशत जनसंख्‍यालाई कोरोनाबिरुद्ध भ्याक्सिन उपलब्ध हुने विश्वास गरिएको छ । यो भ्याक्सिन नेपालका क्लिनिकहरुमा समेत सहज रुपमा उपलब्ध गराइने बताइएको छ।
यो भ्याक्सिन ७५ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वैज्ञानिक पब्लिकेसनहरुले प्रमाणित गरेको र २५० क्लिनिकहरुमा समेत परीक्षण भइसकेको कम्पनीले दाबी गरेको छ ।
यो भ्याक्सिन नै विश्‍वको पहिलो कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्‍याक्सिन हो जसलाई भेक्टर प्लेटफर्ममा ल्‍याइएको छ।
११ अगस्टमा २०२० मा विकास गरिएको ‘स्पुतनिक भी’लाई पहिलो पटक गामालेया राष्ट्रिय रिसर्च इन्स्टिच्‍युट अफ इपिडिमियोलोजी र माइक्रो बायोलोजीले रुसको स्वास्थ्‍यमन्त्रालयमा दर्ता गरेका थिए।
गत सेम्टेम्बर ४,सन् २०२० मा उक्त भ्‍यासिनको पहिलो चरणको कार्यपत्र तयार गरेर दोस्रो चरणमा क्लिनिकलमा परीक्षण गरेको रिपोर्ट ल्‍यानसेट मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित गरिएको पनि बताइएको छ ।
मेडिकल रिपोर्टमा करीब ४० हजार व्‍यक्तिलाई स्वयसेवी रुपमा स्पुतनिक भ्‍याक्सिनको परीक्षण गरी शतप्रतिशत नतिजा आइसकेकोबताएको छ। यही भ्याक्सिन लगाउनका लागि गरीब ६० हजार स्वयमसेवकहरुले उक्त भ्‍याक्सिनका लागि आवेदन दिएका थिए।
स्पुतनिक भीका लागि एसियाका करीब ५० देश, मध्‍य पुर्व, ल्‍याटिन अमेरिका, युरोप र सीआइएसले आवेदन दिएको आरडीआइएफले विज्ञप्तिमा जनाएको छ।
साथै आरडीआइएफले मेक्सिकोमा ३ करोड २० लाख डोज, ब्राजिलमा ५ करोड डोज, भारतमा १० करोड डोज र उज्वेकस्तानमा ३ करोड ५० लाख डोज निर्यात गर्ने सहमति भइसकोको उल्लेख गरेको छ।
रुस सरकारले नेपालीहरुमा पनि निशुल्क परिक्षण गराउनका लागि प्रश्ताव गरेको थियो तर नेपालले यसको स्विकृति नदिएकोले अन्य देशमा सफल परिक्षण गरेर अव यी कम्पनीहरुले आफ्नो बजार विस्तारको लागि पहल गर्ने क्रममा रहेको स्रोतले बताउछ । यसै शिलशिलामा नेपालमा पनि यो भ्याक्सिन भित्रिन लागेको हो ।
यदी यो भ्याक्सिन भरपर्दो र सुलभ हुन्छ र सर्वसाधारणको पहुँचमा रहन्छ भने सरकारले अनुमति दिनमा किन ढिलाई ?आफुले सस्तोमा औसधी उपलब्ध गरउन पनि नसक्ने र लयाउन खोजने कम्पनीलाई स्विकृति दिन पनि किन कञ्जुस्याइ ?